IFama yaseBlossom iSihlomelo sibonelela ngendawo yokuphumla enoxolo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguShaun
Ikhaya leeholide elithandekayo elizimeleyo kwilali ezolileyo, umgama wokuhamba ukuya kwindawo ye-pub yasekhaya, ipaki yabantwana kunye nebala legalufa. Igumbi lokulala elikhulu eline-en-suite, igumbi lokulala eliphindwe kabini, igumbi lokuhlambela, igumbi lokuphumla kunye nekhitshi elifakwe ngokupheleleyo. Ngaphandle kukho i-paddock yokonwabela, indawo yokuhlala yangaphandle kunye nokupaka ngaphandle kwendlela. Izinja ezimbini eziziphethe kakuhle zamkelekile. Ibekwe kumbindi wedolophu yeCathedral yaseLincoln, idolophu yentengiso yaseNewark, iGainborough Retford inokubona okuninzi kunye nokwenza kule ndawo.
Indawo yokuhlala ebanzi eneendawo zokupaka ezikhuselekileyo endleleni kunye nendawo eninzi yangaphandle. Super ukumkani ubukhulu kunye neebhedi ubukhulu ukumkani. Inketho yebhedi yesofa okanye ibhedi yokuhamba. Ikona yokufunda epholileyo kwindawo yokumisa ilanga okanye indawo yokusebenza enedesika ukuba iyafuneka. Wifi kwipropati. Iti kunye nekofu kunye nezinye izinto ezibalulekileyo.
Indawo enkulu esembindini enokufikelela ngokulula kakhulu kangangokuba le ndawo kufuneka ibonelele, kubandakanya ukuloba kuMlambo iTrent okanye kumachibi asekhaya, ukuhamba kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile, iMillfield Golf Complex enezifundo ezi-3 ongakhetha kuzo, kunye neendawo ezininzi zembali onokuthi undwendwele ngaphakathi kweBomber. County. Ukutyelela iLincoln's Cathedral Quarter kuyimfuneko, kunye neCastle, Cathedral & boutique store zeBailgate & Steep Hill ukuze ukhangele. Ukusondela kuzo zombini iLincolnshire kunye neNewark Showgrounds kwenza le ndawo ibe yindawo efanelekileyo yokuhlala kwimisitho kuyo nayiphi na indawo.
Sihlala kwipropathi esebumelwaneni ngoko ke uShaun kunye nam sikhona ukuphendula nayiphi na imibuzo okanye uncedo ngayo nayiphi na indlela esinokuthi siqinisekise ukuba ukuhlala kwakho kuyinto entle! Ukuba uyabhiyozela okanye unezicelo ezikhethekileyo ngaphambi kokufika, nceda ungalibazisi ukubuza.
Sihlala kwipropathi esebumelwaneni ngoko ke uShaun kunye nam sikhona ukuphendula nayiphi na imibuzo okanye uncedo ngayo nayiphi na indlela esinokuthi siqinisekise ukuba ukuhlala kw…